Jubbaland oo qabatay lacag feelso ah iyo rag watay - Awdinle Online
Jubbaland oo qabatay lacag feelso ah iyo rag watay
Ciidanka ammaanka Maamulka Jubbaland ayaa goor-dhaweyd gacanta ku dhigay lacago been abuur ah iyo waxyaabo maanka dooriya oo la doonayay in si qarsoodi ah loo geliyo magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Xeer ilaaliyaha Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan Saciid oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in howlgal qorsheysan oo ay ciidamada ammaanka ka fuliyeen xeebta Kismaayo lagu qabtay dooni sidday 65 milyan shilin Soomaali been abuur ah.
Sidoo kale inta uu socday howlgalka ay sameeyeen Ciidanka amniga Jubbaland ayaa waxaa kusoo qabteen maandooriyaha xashiishka, kuwaasi oo la doonayay in gudaha Magaalada la geliyo.
Maxamed Sheekh Cismaan ayaa xusay in sidoo kale ciidamada ay gacanta ku dhigeen Afar qof oo lacagaha been abuurka ah iyo waxyaabaha maanka dooriya waday, kuwaasi oo uu sheegay inay ku socoto baaritaanno dheeraad ah.
Previous articleDeni oo la kulmay Safiirka Mareykanka & Wakiilla QM
Next articleMidowga Musharixiinta oo ka hadlay dhageysiga Dacwadda Badda